Nhau - Unyanzvi hwesarudzo yemitsara inodedera skrini
1. maererano nesarudzo yesiti
Kureba uye upamhi hwesaiti zvinofanirwa kutariswa kune yakasarudzika vibration yekuongorora mhando; dzimwe nguva hupamhi hwechibuda cheiyo linear vibrating skrini inogumira, uye kukwirira kwenzvimbo kunogumirawo. Panguva ino, mota mbiri dzinodedera dzinogona kuiswa kumusoro kana mativi ese erutivi rwekuzungunusa chinoenderana nemamiriro enzvimbo.
2. Iko kurongeka kwekuongorora uye kuongorora goho rezvinhu kunofanirwa kutariswa
1) Iyo yakakura kureba kwechidzitiro pamusoro peiyo mitsara inozungunusa skrini, iyo yepamusoro iyo yekuongorora chaiyo, iyo yakakura hupamhi, iyo inowedzera iyo yekuongorora goho. Naizvozvo, hupamhi hwakafanira uye kureba kunofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo.
2) Kana iyo yekugona inokwana yakaderera, tinogona kusarudza iyo diki mhando yeanodedera skrini, uye kana iko kugona kwekugadzira kukwirira, isu tinofanirwa kusarudza iyo hombe-inoyera mitsara inodedera skrini.
3.Kukomberedza kona yekona pamusoro pechiso chinotenderera kuchidzora,
Kana iyo yekurerekera kona yekona pamusoro iri diki kwazvo, izvo zvinhu zvichavharwa. Kana iyo yekurerekera kona yakakura kwazvo, iko kuongorora kwekutarisa kuchaderedzwa. Naizvozvo, iyo yekurerekera kona yekona pamusoro inofanira kunge iri pakati.
4. hunhu hwezvinhu
1) Kana uchisarudza chinozungunusa skrini, isu tinofanirwa kusarudza zvinhu zvakasiyana zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana zvinhu. Semuyenzaniso, inoparadza kusarudza Stainless simbi vibrating sikirini.
2) Iyo mesh saizi inosarudzwa zvinoenderana nehukuru hwezvinhu zvinhu.